Ity ny CDay, andro eritreretin'ny mpamorona | Famoronana an-tserasera
Raha iray amin'ireo olona tia famolavolana ianao dia tsy maintsy efa nandre momba an'i CDay, a hetsika fanao isan-taona notontosain'i Cutedrop ary izany dia mampivondrona vondrona voafantina matihanina TOP hizara, mandritra ny tontolo andro, ny fahalalanao miaraka amin'ny galeria izay liana te hianatra.
Ny CDay dia ao amin'ny andiany fahefatra ary manana andro tsy hay hadinoina ho an'ny rehetra indray.
Miaraka amin'ny lohahevitra Ho an'iza ianao?, # cdayrio2016 dia mitondra taratry ny maha-zava-dehibe ny fisainana momba ny famolavolana amin'ny alàlan'ny fomba fijerin'ny mpampiasa na ny mpanjifa ary ny miankina amin'ny fahombiazan'ny asa amin'ny fahalalana ny mpihaino kendrena avy amin'ny matihanina.
1 CDay: Rahoviana ary aiza?
2 Iza no matihanina hanatrika ny CDay?
CDay: Rahoviana ary aiza?
Ny # cdayrio2017 hotontosaina amin'ny 8 Oktobra, manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva ao amin'ny Instituto Cervantes, any Rio de Janeiro. Tsara tarehy ity institiota ity ary raha tsy ampy izany, dia akaiky ny morontsirak'i Botafogo izy io ary manana fomba fijery tsy mampino, raha lazaina amin'ny teny hafa dia afaka mankany amin'ny toerana misy tombontsoa ianao.
Maninona no manatrika? SATRIA misokatra ny fisoratana anarana, voafetra ny toerana ary azo idirana ny vidiny, ankoatry ny resaka nataon'i matihanina amin'ny famolavolana izay hasehonay anao manaraka, zavatra tsy tokony halainao izy ireo.
Iza no matihanina hanatrika ny CDay?
Diplaoma amin'ny famolavolana indostrialy avy amin'ny Oniversite federaly any Rio de Janeiro, miaraka amin'ny mari-pahaizana Master amin'ny Tantaran'ny kanto ary PhD amin'ny kanto Visual, manana Post-Doctorat eo amin'ny sehatry ny Cultural Studies, avy amin'ny Advanced Program of Contemporary Culture - PACC / UFRJ, an'ny Federal University of Rio de Enero.
Profesora mpiara-miasa sy mpanorina / mpandrindra ny Laboratoire ny Visual Communication Graphic Nucleus (LabGraf), izay miandraikitra ny toeran'ny Mpandrindra akademika ny Mazava ho azy Serasera fifandraisana. Volavola.
Master sy PhD amin'ny antropolojika avy amin'ny UFF (Fluminense Federal University) dia miara-miasa amin'ny andalana fikarohana momba ny fanjifana sy ny kolontsaina ara-materialy, tanàna, asa fanatanterahana vehivavy ary lamaody.
Manana mari-pahaizana momba ny fikarohana ara-barotra sy tsena ary diplaoma amin'ny fifandraisana ara-tsosialy izy, manana traikefa eo amin'ny tsena ny orinasa Coca-Cola, Fleischmann, Royal & Nabisco, Gillette avy amin'ny Profesora Brasil & Co. amin'ny andrim-panjakana: IED (Ivon-toerana momba ny endrika endrika eropeana ), Senai Cetiqt ary ABGC (Fikambanan'ny fitantanana kolontsaina breziliana).
Tale manam-pahaizana ary tompon'andraikitra amin'ny traikefan'ny mpampiasa ny vokatra nomerika novokarin'i Huge Rio.
Izy io dia miforona amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny UFRJ sy Mpampianatra amin'ny famolavolana fifandraisana avy amin'ny Middlesex University. Niditra an-tsehatra tamin'ny tontolon'ny tetikasa dizitaly i Laura nandritra ny 15 taona tany Brezila, Etazonia, Fanjakana Mitambatra, Espana ary India.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ity ny CDay, andro eritreretin'ny mpamorona